Nezvedu - Shijiazhuang Haiti Amino Acid Co., Ltd.
Shijiazhuang Haiti Amino Acid Co., Ltd. yakavambwa muna 2003. Iyo inyanzvi yepamusorosoro yekugadzira bhizinesi inoshanda mukugadzira amino acids (giredhi rekudya & giredhi remishonga), zvinowedzera zvekudya uye zvemishonga zvinobata.
Yedu yekugadzira musangano inovakwa zvinoenderana neGMP zviyero, neepamberi zvigadzirwa zvekugadzira, zvigadzirwa zvehunyanzvi zvekuongorora uye yakakwana inotungamira manejimendi system. Yakawana hunyanzvi hwakawanda kusanganisira rezinesi rekugadzira (SC), ISO22000, ISO 9001: 2015, HACCP, Kosher, Halal, nezvimwe. Yedu mhando yechigadzirwa iri Yakakwirira uye yakatanhamara. Inogona kusangana nezvinodiwa neCP, USP, EP, BP, AJI, FCC uye mamwe akakosha emhando yepamusoro-magumo vatengi.
Kuti uenderere mberi nekuvandudza hunyanzvi kugona, iyo kambani yakagara yakanamatira kune rekuvandudza zano re "kugadzirwa, kudzidza uye kutsvagisa". Kwemakore mazhinji, yakachengetedza kubatana kwepedyo nemayunivhesiti mazhinji nemasangano ekutsvaga kwesainzi, ichigara ichivandudza tekinoroji yekugadzira. Haiti Amino Acids inoenderera nekuwedzera R & D kudyara, kupinza inoramba ichikwira mukuvandudza kwekambani nekusimudzira.
Kuvimba nemhando yepamusoro yezvigadzirwa nemhando yepamusoro sevhisi, Haitian amino acid zvigadzirwa zvakaendeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi masere nematunhu, kusanganisira Europe, United States, Japan, Korea, nezvimwewo uye ndokukunda kurumbidzwa kwakawanda!
Haiti amino acid, Kurwira basa rehutano hwevanhu.